Sọpụrụ na-ewetara Honor 9X Pro, Ime Anwansi Lelee 2 na Ime Anwansi Earbuds maka Spain | Akụkọ akụrụngwa
Onye Asia na-asọpụrụ Honor taa gosipụtara ngwaahịa ọhụụ maka mba anyị. Anyị ga-ahụ n'etiti ha ufọt ufọt nso Honor 9X Pro, na ama mara Kirin 810 processor na enweghị ọrụ Google n'ime. Ọ ga-abụ otu n'ime ngwaọrụ ndị ahụ ga-emepe ụlọ ahịa ọhụrụ ya na Spain, nke ga-amalite ịrụ ọrụ na May 12. Ọ gaghị abụ naanị ihe dị na ụlọ ahịa ọhụrụ a, ebe ọ bụ na enyerela ha Ime Anwansi Anwansi na Anwansi Anwansi 2.
Honor ekwuputala ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, Hihonor.com nke ga-arụ ọrụ dị ka ibe gọọmentị na mba ahụ yana isi okwu maka ndị ọrụ obodo, nke a ga - emelite na ụbọchị mmeghe na May 12, dịka ụlọ ọrụ ahụ ekwupụtalarị na mmemme ngosi nke mere taa. Ebe nrụọrụ weebụ a ga-agụnye ọtụtụ katalọgụ nke ngwaọrụ n'ihi na ha na-ahụ maka nkesa nke aka ha ma nyekwa mbupu n'efu maka ngwaahịa nwere ọnụahịa malite na .39,90 31, dịka nkwụghachi ụgwọ n'efu n'oge XNUMX mbụ si zụọ
1 Nkwanye 9X Pro: Kirin 810 na ọnụego edozi
1.1 Nka na ụzụ nkọwa
1.2 Nzube na ngwaike maka ọha na eze
1.3 Batrị na ngwanrọ anyị na-atụghị anya ya
1.4 Igwefoto niile
2 Asọpụrụ Ime Anwansi 2
3 Sọpụrụ Ime Anwansi Earbuds
Nkwanye 9X Pro: Kirin 810 na ọnụego edozi
Mkpebi: 2340 x 1080
OS: Sọpụrụ Ime Anwansi UI dabere na gam akporo 9 achịcha
Ihu 16 MPX, F / 2.2
A-GPS | EGO | GALILEO
Agụ na azụ
Accelerometer, gyroscope, sensọ ike ndọda, ihe mmetụta sensọ, barometer na compass
Ahịa: 249,99 €
Nzube na ngwaike maka ọha na eze
Honor 9X pro bụ ọnụ ahịa mbụ nke Honor gosipụtara maka ụlọ ahịa ọhụrụ ya, Ọnụ a bụ mmeghari ohuru nke Honor 9X nke ewepụtara n'afọ gara aga. Ebe dị n'etiti nke na-agbanye 6,59 nke anụ ọhịa IPS LCD nke nwere ihu n'ihu niile maka eziokwu ahụ na ọ nweghị ụdị ọkwa ma ọ bụ oghere ọ bụla na ihuenyo ahụ, n'ihi eziokwu ahụ webata igwefoto dị n'ihu na usoro periscope. Na azụ anyị na-ahụ otu iko emecha nwere ụdị ihe ngosi X na-acha odo odo ma na-adị ezigbo nro na ụdị ojii ya.
A na-emelite ihe nlere a site na itinye n'ime Kirin 810, yana usoro 7 nanometer na usoro DaVinci maka ọgụgụ isi, nke na-enye 5,6% arụ ọrụ dị elu ma e jiri ya tụnyere onye bu ya ụzọ Kirin 710, dị ka arụmọrụ kachasị ike ejiri rụọ ọrụ nke ọma. N'aka nke ọzọ, na ọkwa GPU ọ ka mma site na 175%, ihe na ọnọdụ nke okpomọkụ ga-adị achịkwa mmiri jụrụ na Honor webatara na ọnụ a, nwee ike ibelata ogo site na ogo 5. Banyere RAM, ọ na-etinye 6 GB LPDDR4x. Ihe mkpịsị aka mkpịsị aka ga-adị na azụ.
Batrị na ngwanrọ anyị na-atụghị anya ya
Ihe kacha ju anyị anya gbasara ọdụm a abụghị ikike ya, yana enweghị ọrụ Google, nke hapụrụ anyị ihe na-anọghị ebe, bụ na a na-ebupụta ya na ahịa yana gam akporo 9 achịcha dị ka nsụgharị nke sistemụ arụmọrụ. Ihe a na-apụghị ịghọta aghọta taa, ọ bụ ezie na onye mepụtara na-emesi anyị obi ike na ọnụ ga-emelite n'ọdịnihu. Ọ bụ nke mbụ Honor na-abata na Spain na Huawei App Gallery webatara. Batrị ahụ bụ 4.000 mAh na ụgwọ 10W "ngwa ngwa".
Ngwaọrụ a nwere igwefoto nwere okpukpu atọ yana a 48 MPX isi ihe mmetụta, na oghere oghere nke 1.8, a obosara nke 8 MPX, Baịbụl hiwere isi n'ebe nke 2.4 na n'ikpeazụ a miri emi oghere na-esonyere a 2 MPX mmetụta na a Baịbụl hiwere isi n'ebe nke 2.4. Maka igwefoto n'ihu anyị nwere ihe mmetụta 16 MPx zoro ezo na usoro periscope. Honor ejirila nhazi ihe onyonyo kachasị dị elu wee nye ndị ọrụ a, nke a na-enye ohere iji nweta onyonyo na-enwu gbaa na ISO okpukpu anọ karịa nke bu ya ụzọ nkwado maka ọnọdụ gbara ọchịchịrị ya "Super Night 2.0".
Asọpụrụ Ime Anwansi 2
Anyị ga-ekwu maka igwe elekere ọhụụ Honor Magic Watch 2, nke nwere atụmatụ abụọ, 42 na 46 millimeters na dayameta. Ọ na-agụnye igwe anaghị agba nchara na batrị nwere obodo kwụụrụ onwe ya ruo izu abụọ dịka ndị rụpụtara ya si dị. Ihe nlere a na-eji Kirin A1 processor. Ihuenyo ahụ bụ AMOLED nke nwere anụ ọhịa 1,2-anụ ọhịa n'ihe gbasara ụdị 42mm na 1,39 nke anụ ọhịa na 46mm nwere ihe ruru 800 NITS nke nchapụta, nke ga-enye anyị ohere ile ọdịnaya anya n'ụzọ zuru oke. Ọ na-etinye ọrụ "Mgbe niile na-egosipụta" nke ga-enyere anyị aka ịnwe ihu igwe oge niile na-elele oge, yana obere ike ike. Anyị nwere ike ịnụ ụtọ egwu site na 4GB nke ebe nchekwa dị n'ime ya.
Ọ na - enye nlekota obi nke ga - arụ ọrụ mgbe ọ na - egwu mmiri, ekele maka mgbochi mmiri ya, nke na - akwado ihe ruru mita 50. Maka ndị na-agba ịnyịnya ígwè ma ọ bụ ndị na-agba ọsọ, ọ na-etinye GPS abụọ nwere nha anya doro anya, yana mmemme mmemme izizi 13 na ọrụ enyemaka iji kwado usoro mgbe niile. Versiondị 46mm ga-adị na oji maka 129,90 site na iri na abuo rue abali iri na abuo nke onwa nfo na nkwalite, na ya ukara peeji Hihonor.com mgbe ahụ ọ ga-abụ € 179,90. A ga-ere ụdị 42mm maka ọnụ ahịa nkwado nke € 129,90 na oji na € 149 na pink. N'okwu abụọ ahụ gụnyere ekweisi egwuregwu. Ozugbo nkwalite ahụ kwụsịrị, ọnụahịa ya ga-abụ 169,90 199,90 na € XNUMX karị.
Sọpụrụ Ime Anwansi Earbuds
Honor egosilakwa igwe ekwe ekwe ọhụrụ yaEzubere maka gburugburu ebe obibi na-eme mkpọtụ, ha ga-eme ka iji ha mee ihe "ahụmịhe na-egeghị ntị na-ege ntị" dịka onye nrụpụta si kwuo. Ime Anwansi Anwansi webata ọrụ mkpọtụ kagbuoSite na sistemụ nwere igwe okwu abụọ na-ejikwa iwepu ihe dị ka 27DB nke mkpọtụ ikuku n'ihe gbasara ụgbọ elu na ruo 25DB n'ihe banyere ụzọ ụgbọ oloko, ọ na-emekwa ka mkparịta ụka ka mma na oku.
Site na onye na-anya 10mm na Hipair na-ejikọta teknụzụ, ọ na-eme ka usoro njikọ ahụ dị ngwa, dị ka ndị kachasị elu, nwee njikwa aka nwere ike ịhazi site na ntọala. Igweisi ekweisi a ga-adị na weebụsaịtị ha site na Mee 12 ruo 19 maka ego na € 79,90 nkwalite, nke ga-aga n'ihu € 99,90.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Sọpụrụ na-ewetara Honor 9X Pro, Ime Anwansi Lelee 2 na Ime Anwansi Earbuds maka Spain